यी राशी हुनेसँग बढि आकर्षित हुन्छन् विपरित लि’ङ्गी – SUDUR MEDIA
April 21, 2021 AdminLeaveaComment on यी राशी हुनेसँग बढि आकर्षित हुन्छन् विपरित लि’ङ्गी
ज्योतिषको राशि चक्रममा मेश राशि पहिलो स्थानमा पर्छ । यो राशीको चिन्ह भेडो हो । यो राशि पूर्व दिशाको प्रतिक मानिन्छ भने यस्को स्वामी मंगल हो ।मेष राशि अन्तर्गत अश्विनी र भरिणी नक्षत्रका चारै चरण र कृतिका नक्षत्रको प्रथम चरण आउँछ । यो राशिका मानिसमा रिस र जिद्दी स्वभाव हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति सामान्य कुरा पनि आफूले भनेको जस्तो नभए क्रोधित हुन्छन् । र झगडा गर्न कसिन्छन् । राशी अनुसारको प्रेम सम्बन्ध थाहा पाउनुस्ः
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ! प्रेममा निकै समर्पित हुन्छन् र प्रेमबिना मानसिक र सारीरिक रुपमा निकै कमजोर सावित हुन्छन् । प्रेम सम्बन्धमा आउने अवरोध र रोकावटलाई हटाउन ज्यानको बाजी लगाउन तयार हुन्छन् । महिलाहरुले प्रेममा सेक्सलाई प्राथमिकता दिन्छन् । कन्या राशिसँगको प्रेम सम्बन्ध सबैभन्दा सफल र राम्रो हुन्छ । कर्कट र मीन राशिसँगको प्रेम सम्बन्ध भने असफल र हानीकारक हुनेछ ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो ! प्रेम सम्बन्ध उतिसारो सफल मानिँदैन । झ्वाट्टै प्रेम बस्ने तर दिगो नहुने समस्या रह्न्छ र बढि भावनामा डुब्ने र सानो कुराले पनि शंका उत्पन्न गर्ने भएकाले प्रेम सम्बन्ध दिगो रहन सक्दैन । प्रेममा सहानुभुति चाहनु यो राशिका महिलापुरुषको कमजोरी हो । मेष, वृश्चिक, धनु तथा मकर राशिसँग प्रेम सम्बन्ध राख्नु क्षति बेहोर्नुबाहेक केही होइन । अरु राशिसँग प्रेम गर्नु तुलनात्मक रुपमा सामान्य रहन्छ ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह ! मनमा कुरा अडाउन नसक्ने र आवेशमा आइहाल्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरुले धनसम्पत्ती र प्रेमलाई समान महत्व दिने भएकाले प्रेमको मामिलामा उतिसारो सफल मानिँदैनन् । प्रेम सम्बन्ध खासै दिगो नहुने भएपनि जति समयसम्म प्रेम रहन्छ त्यो निकै रोमान्टिक हुन्छ । खासगरी मिथुन राशि र सिंहराशिबीचको प्रेम सम्बन्ध निकै सफल र नाटकीय हुन्छ । धनु राशिसँगको प्रेम दार्श्निक हुन्छ । तर वृश्चिक राशिसँगको प्रेम भने असफल हुन्छ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ! यो राशिका नारी पुरुषहरु साँचो र दिगो मायाप्रेम गर्ने खालका हुन्छन् । आफुले चाहेको व्यक्तिलाई प्रेमजालमा फसाउन खप्पिस हुन्छन् । निकै मायालु तथा दयालु स्वभावका हुन्छन् र सानातिना अवरोधले विचलित हुँदैनन् । विपरित लिंगीप्रतिको आकर्षण पनि बढि हुन्छ । तर पनि सिंह, धनु र मकर राशिसँगको प्रेम भने उतिसारो सफल हुँदैन । अरु राशिसँगको प्रेम सफल हुने देखिन्छ ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ! यो राशिका महिला पुरुष अ’हंकारी हुन्छन् । तरपनि प्रेमसम्बन्धमा समर्पणको कमी हुँदैन । प्रेमीप्रेमीकाको सधै भलो चाहन्छन् । झ्वाट्ट प्रेम गर्नुभन्दा सबैकुरा सोँचविचार गरेर मात्र माया प्रेम गर्ने स्वभाव यो राशिमा हुन्छ । यो राशिका महिला पुरुषले मेष, मिथुन, तुला तथा धनु राशिका सँग प्रेम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ! यो राशिका महिला पुरुष प्रेममा तनाब लिइरहने प्रकृतिका हुन्छन् । निकै यौ’नआतुर हुन्छन् र प्रेम सम्बन्धमा सेक्सलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् । तरपनि आफ्नो प्रेमीपे्रमीकालाई इज्जत गर्न जान्दछन् । वृष र सिंह राशिसँगको प्रेम सम्बन्ध लाभदायक छैन अरु राशिसँग सामान्य छ ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ! यो राशिका मानिस सावधान भएर मात्र प्रेम गर्छन् । बौद्धिक आधारमा प्रेम गर्छन् । पुरुषहरु परस्त्रीप्रति समेत आँखा लगाउने खालका हुन्छन् । शं’कालु स्वभावका हुन्छन् । तुला राशिकाले सिंह र धनु राशिका सँग प्रेम गर्नु फलदायक हुन्छ । बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ! यो राशिका महिला पुरुष विलासी स्वभावका हुन्छन् र प्रेममा लिप्त हुन्छन् । भ्रमण गर्न रुचाउँछन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन् यी ३ राशिका बुहारी, मानिन्छन् लक्ष्मी समान…..ज्योतिष विज्ञानमा हामी नेपालीहरु जो कोहीले धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् ।
अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमा नै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ । एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई । मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन से’क्सी देखिन्थी ।